China Anti dzinokwira Fence vagadziri uye bhizimisi | Hua Guang
Specification Anti kuchengeteka fenzi ndiye kuchengeteka fence hurongwa. The pedyo pajira riya rinoshandiswa mumajeri uye mamwe zvivako akachengeteka sezvazviri kutonetsa kukwira. The pedyo pajira riya kunorevawo kuti fenzi zvakaoma chaizvo kudimbura pamwe chinhu asi yemagetsi. Mukuru kuchengeteka fence hurongwa kwave ichangobva yakatanga kuti akachengeteka kupfuura kare. Ukomba akafukidzwa ne kuramba heavyweight kiramba nemizariro, iyo inopa nzvimbo zvireruke kukoshesa rugure. The Hurongwa ane ...
Anti kuchengeteka fenzi ndiye kuchengeteka fence hurongwa. The pedyo pajira riya rinoshandiswa mumajeri uye mamwe zvivako akachengeteka sezvazviri kutonetsa kukwira. The pedyo pajira riya kunorevawo kuti fenzi zvakaoma chaizvo kudimbura pamwe chinhu asi yemagetsi.
Mukuru kuchengeteka fence hurongwa kwave ichangobva yakatanga kuti akachengeteka kupfuura kare. Ukomba akafukidzwa ne kuramba heavyweight kiramba nemizariro, iyo inopa nzvimbo zvireruke kukoshesa rugure. The Hurongwa anovengawo bvisika fixings zvichireva kuti ukomba hazvigoni kubviswa nokuda yaizova mvumo.
The hurongwa zvakare utilizes cylindrical dzepamakona zvichireva kuti fenzi mutsetse anogona dzapwa chero yorusvingo, zvichireva kuti fenzi zviri nyore kuisa mukati chero mamiriro ezvinhu.
fenzi womuenzaniso kukwirira fenzi siyana (mm) rakafara Panel siyana (mm) waya dia of siyana (mm) yepasi yokutanga (mm) pambiru saizi mhando (mm)
800-2500 2000-3100 3.0-5.0 12.6 * 76.2 mativi mumhanyi: 60 * 60, 80 * 80
12.5 * 75 C kuposita 60 * 80mm
25. * 75 H mumhanyi: 44 * 100
mukurumbira Panel saizi 1800 * 2400 2100 * 2400 2400 * 2400 2475 * 3100 2200 * 2800
mukurumbira romukova saizi 60 * 60 * 2.0 (thk) 60 * 80 * 2.0 (thk) 60 * 60 * 2,2 (thk) 60 * 60 * 2.5 (thk) 60 * 80 * 2,2 (thk)
pamusoro kurapwa 1. Black waya welded ipapo hot-vakanyika kwakakurudzira chete
2. kwakakurudzira pamwe ipapo upfu Coated
3.Galvanized pamwe ipapo PVC Coated
Min hurongwa: 100PCS
Payment mazwi: 30% TT sezvo prepaid, ipapo mari pachiyero panguva pamberi kopi p.
Supply kugona: 400TON / PAMWEDZI
Delivery nguva: 30
Things kuziva Kana panovakwa R ...
1. Kana Square Post Fence kuvaka chikwata anoita installation, inofanira zvakarurama kunzwisisa siyana pakuvaka vanodhirowa, uye kuvhara chaiyo wezwi-siyana mapaipi akavigwa panzira ...
Ndezvipi zvakanakira Of Barbed Wire Fe ...
Barbed waya fenzi haakuvadzi kwete chete asiwo decoration chaizvo, zvigadzirwa kwete chete simbi, asiwo chekare. Tower Fence nokutengesa ainyanya akatsanangurira kubva kumaonero maviri vakachengeteka uye kushongedzwa: Kubva pakona rimwe of ...
© Copyright - 2010-2019: All Rights Reserved. Tips ,Hot Products ,Sitemap ,AMP Mobile Stainless Steel Diamond Wire Mesh, Plastic Chain Link Fence, Steel Wire Mesh, Chain Link Wire Mesh , Euro-Fence , bvisika Temporary Fence ,